1915 Sawirada Buundada Çanakkale ayaa la wadaagay markii ugu horeysay | RayHaber | raillynews
HomeTURKEYGobolka Marmara17Sawirada 1915 Bridge Canugale waa la wadaagay markii ugu horeysay
Sawirada 1915 Bridge Canugale waa la wadaagay markii ugu horeysay
17 / 02 / 2017 17, tareenka, GUUD, hyperlinks, Headline, TURKEY
Sawirada sawirada 1915 Bridge ee Boorama ayaa markii ugu horeysay la wadaagay: Sawirada 1915 Bridge ee Caanakkale ayaa markii ugu horreysay lagu daabacay TRT News
Sawirada Sawirka 1915 ee Caanakkale ayaa markii ugu horeysay lagu daabacay TRT News. Ahmet Arslan, Wasiirka Gaadiidka, Arrimaha Badaha iyo Isgaadhsiinta, wuxuu ahaa martiqaadkii Yasar Taşkın Koç, Madaxa Waaxda Warfaafinta iyo Ciyaaraha.
MUUQAALOOYINKA MASHRUUCA LAGA QAADAY DOORKA KOOWAAD
Ahmet Arslan, Wasiirka Gaadiidka, Arrimaha Badaha iyo Isgaadhsiinta, ayaa ku dhawaaqay muuqaalka sawir-qaadaha 1915 Bridge ee magaalada, kaas oo noqon doona buundada ugu weyn adduunka, barnaamijka telefishanka markii ugu horeysay.
Sidaa daraadeed, aragtida mashruuca weyn, oo ah aasaaska loo dhisi doono sannadguuradii 18 ee Guusha Maraarka March, ayaa markii ugu horreysay lala wadaago dadweynaha.
FURSADAHA MASHRUUCA GIANTI:
-2 waa buundada ugu dheer ee adduunka ku jirta oo leh miisaan ah kun oo mitir 23.
-Boqolku wuxuu ka kooban yahay jidadka 3 oo ay ku jiraan imaanshaha 3 iyo ka tagitaanka 6.
Inaad ku xirto Istanbul oo leh Caanakkale iyo Aegean
Hantidhawridda mashruuca Kinali-Tekirdağ-Caanakkale-Savaştepe iyo mashruuca 1915 ee Caanakkale ayaa lagu soo bandhigay qaab-dhismeedka Dhismaha-Hawlgabka (BOT).
Qiimaha iibka faahfaahinta ee qiimaha iibka ee Chaakkale 1915, kaas oo la siin doono nidaamka hindisada xiran, waxaa lagu go'aamiyaa sidii 100 kun TL iyo xiritaanka dalabka ee 100 Milyan TL. Raysal wasaaraha Binali Yildirim wuxuu sheegay in shirkadaha Turkish, iyo sidoo kale shirkadaha Japan, Korean iyo Shiinaha, ay codsanayaan dhismaha 1915 Bridge ee 2023.
18 March March 2017da xafladda dhismaha ayaa lagu qaban doonaa ra'iisal wasaaraha Yildirim wuxuu sheegay in lacagta lagu beddelayo Euro + VAT 15 uu yiri. Kinalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe 1915 oo ah waddada isgoyska Çanakkale 1 waxayna fududeyneysaa gaadiidka ka imaanaya Istanbul. iyo 2. Kulanka IDC waxaa la qaban doonaa bisha Sebtembar ee loogu talagalay mashruuca wadada weyn ee 29.
Qiimaha mashruuca 9.843.000.000 TL waxaa ka mid ah Silivri, Tekirdağ, Marmara Ereğlisi, Çorlu, Süleymanpaşa, Malkara, Caanakkale Gallipoli, Lapseki, Chan, Yenice iyo Balikesir Balya iyo Xarunta.
Kinalı - Tekirdağ - Çanakkale - Savaştepe Otoyolu waa mid ka mid ah mashaariicda lagu bartilmaameedsanayo 2023, waana mashruuc aad u muhiim ah oo isku xiraya Istanbul illaa Kaangalaale iyo kadib waqooyiga Aegean.
Mashruucan wuxuu bixin doonaa beddelaad cusub oo loo maro Istanbul Bosphorus Crossing, gaar ahaan safarada / gaadiidka u dhexeeya Aegean, galbeedka Anatolia, axsaabta - Konya iyo gobolka Galbeedka Mediterranean iyo Thrace / Europe.
Buundada Dardanelles waxay noqon doontaa biriijka ganaaxa ee u dhexeeya Sutluce Suluca iyo dhinacyada Yurubta iyo Aasiya ee Dardanelles. Buundada waxay ku xiran tahay shabakada isku xirta waddooyinka ee labada dhinac, Kinali dhinaca Yurub iyo Balıkesir dhinaca Asia.
Waddada Kınalı - Caanakkale - Balikesir Wadada Wadada waxay ka bilaabantaa aagga Kinali-3 Junction oo ka mid ah O-1 (TEM) Istanbul - Edirne Motorway. Kadibna, waddada Marmara Ereğlisi iyo Chorlu, waxay sii socotaa dhinaca galbeedka waqooyiga gobolka Tekirdağ, waxayna ku sii gudubtaa koonfurta magaalada Malkara iyo waqooyiga magaalada Sharkoy oo waxay gaareysaa bariga Gelibolu oo laga soo galo bariga magaalada Evreeshe.
Waddada weyn ee woqooyiga ah ee degaanka Gallipoli waxay gaarsiisaa Dardanelles Bridge, kaas oo loo qorsheeyay inta u dhaxeysa Sütlüce iyo Şekerkaya. Ka dib markii buundada Bosphorus, waddadu waxay ka gudubtaa koofurta magaalada Lapseki waxayna keenaysaa koonfur-bari waxayna gaadho degitaanka degaanka.
Kadib wadada weyn ee koofur galbeed ee degaanka KAN, waxay waqooyi u noqonaysaa degsiimada Yenice oo ka sii gudubta qaybta waqooyiga ee degmada. Ka dib markii degitaanka Yenice, wadada loo maro dhinaca bari waxay gaadhay degaanka Balya. Kadib wadada ka baxsan koonfurta magaalada Balya, waxay u noqoneysaa degsiimo Balıkesir oo ku xiran wadada Gebze - İzmir ee galbeedka gobolka Balıkesir.
Dhammaan dhererka isdhexgalka ee isdhexgalka ee Chaakkale Bosphorus Bridge waa mitirka 4023, Dhexdhexaadinta waa mitirka 2023 iyo furfurnaanka dhinaca waa 1000. sida la qorsheeyey. Iyada oo sifooyinkaasi, buundada waxay noqon doontaa buundada ugu weyn ee adduunka ah. Buundada waxay qaadi doontaa waddada 2 3. Waxaa jiri doona socodka labada dhinac ee jaangooyada si loo dayactiro iyo dayactir. Goobta biriijka ayaa la qorsheeyay iyada oo ballaaran oo ku dhow qiyaasta 36 iyo dhererka mitirka 5. Nolosha naqshadeynta dhismaha Daaruses Bridge waxay noqon doontaa sanado 100.
Naqshad horudhac ah / naqshad farsamo ee buundada jooji ah ee lagu dhajin doono Gallipoli iyo Lapseki ee mashruuca;
Jaangooyooyinka Xudduudaha ee Canakkale: Mitirka 3900
Wadarta Gawaarida Guud: Mitirka 3869
Dhexdhexaad dhexdhexaad ah: 2023meter
Xargaha xargaha: 2 x 800meter (haddii kantarool ay ku jiraan badda)
Xuduudaha kale: 2 x 1000meter (haddii kantaroolka ku yaal dhulka)
Noocyada Birta: Ciriiriga birta
Gacan-ku-soo-dhawaansho Geliboli: Mitirka 900
Qaabdhismeedka Lapseki ee Viyaduct: Mitirka 650
Tirada jidadka: 2 × 3 Jidka weyn ee Lidka
Kinalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Oto. Mashruucan waxaa soo diyaariyay Agaasimaha Guud ee Wasaaradda Gaadiidka, Arrimaha Badaha iyo Isgaadhsiinta gudaha mashaariicda mashruuca waddooyinka ee lagu beegsanayo 2023 iyo dhererka wadada wadada waxaa lagu go'aamiyaa 324,415.
Isha: waxaan www.karar.co
Buundada Canacale markii ugu horeysay ee qorshaha
Maqaalada caasimadda, Ankara oo la iloobey waxyaabihii la yaabay